Ikhasino elikhawulezayo- Zonke iibhonasi kunye neekhowudi zokunyusa (iikhowudi zebhonasi) 2021
Yekhasino Fastpay - iibhonasi kunye neekhowudi sokunyusa
Kwi-Casino ye-Fastpay, iibhonasi zinikezelwa ngendlela engaqhelekanga. Kungabonakala kubasebenzisi abangenamava ukuba umgaqo-nkqubo webhonasi wale ndawo uthobekile, kodwa ayisiyonyani le. Kubasebenzisi bayo, abaququzeleli beziko baphuhlise indlela entsha ngokupheleleyo yokusekwa kwenkqubo yenkuthazo.
Inqaku lenkqubo yebhonasi kukuba inani lembuyekezo lotshintsho kwinkqubo yokwandisa imeko yokungcakaza kwinkqubo yokunyaniseka yekhasino ye-Fastpay . Kubasebenzisi abasandula ukubhaliswa, ulawulo lwendawo lubonelela ngeepakethi zokuqala, kwaye inika abadlali abaqhelekileyo ithuba lokuthatha inxaxheba kwinkqubo yeVIP.
Ukwenza kusebenze zonke iintlobo zeebhonasi zeportal ziyafumaneka kube kanye kumsebenzisi ngamnye kwidilesi enye ye-IP emileyo, isixhobo esisesakho, inombolo yefowuni nganye kunye neakhawunti yobuqu yenkqubo yokuhlawula. Ukuba umthengi uzama ukuwugqitha lo mthetho, inkqubo iya kuthintela ibhalansi yakhe kwaye ithimbe yonke imali ebikuye. Zonke ukubheja ezenziwa ngemali evela kwi-akhawunti yebhonasi ayichaphazeli ubume obugcinwe kwinkqubo ye-VIP, kuba yandiswa kuphela ngokudlala ngemali yokwenyani.
Ibhonasi enye yedipozithi inokusebenza kwithuba elinye, kuba azinakudityaniswa. Ngexesha lomdlalo, iimali ziyaqala ukuhlawulwa kwimali eseleyo yomthengi, emva koko kwiakhawunti yebhonasi. Ukujikeleza simahla kukhutshwa kwinqanaba elincinci. Iibhonasi zokuqala nezesibini zokubheja x50 ziyacocwa. Kwabanye, lo mlinganiso ungabonakala ugqithisile, kodwa kufanele ukuba kukhunjulwe ukuba akukho mda kumyinge opheleleyo wolu hlobo lwenkuthazo, olwenza ukuba lube nesisa kakhulu kwaye lube yinzuzo kubantu abangcakazayo.
Ibhonasi yokuqala yediphozithi njengokwazisa okwamkelekileyo
bhonasi yedipozithi yi-25 FS, kwaye isipho sokuzalwa siya kuba ngama-50 FS. Ukuqala kwinqanaba lesine, abantu abangcakazayo banokusixabisa isisa seziko, bengafumani kuphela izipho ezidweliswe ngasentla, eziba nkulu ngakumbi, kodwa kunye nebhonasi yokulayisha kwakhona.
Ukongeza kwizikhuthazi ezidwelisiweyo, abasebenzisi kwinyathelo lesihlanu bafumana ithuba elilodwa lokutshintsha amanqaku afunyenwe ngemali yokwenyani kanye ngonyaka. Ukuqala kwinqanaba lesithoba, abadlali baqala ukufumana i-10% yemali echithwe, ukongeza kuwo onke amalungelo afumanekayo ngelo xesha. Inqanaba le-VIP lithetha ukubalwa kwazo zonke izipho ezidwelisiweyo ezivela kwiziko.